विश्व समाचार Archives – Purba Nepal
आ हा ! छाता सहितको ज्यकेट , नेपालमा कति पर्छ मूल्य ? थाह पाउनुस
on: In: Highlights, आर्थिक, माैसम, विश्व समाचार, समसामयीक
दमक/ नेपालमा यतिबेला वर्षातको समय छ । ब्यस्त मानीसका लागी बाहिर हिडडुल गर्दा सहज खोज्छन् । बर्खाको समयमा पानी परेका बेला हिडडुल गर्न सहज होस भनेर बिभिन्न कम्पनीहरुले बिभिन्न प्रकारका रेनकोट...	Read more
on: In: Highlights, प्रवास, विशेष, विश्व समाचार
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको ८० वर्षको उमेरमा शनिबार निधन भएको छ। उनले नाेबेल शान्ति पुरस्कारसमेत हासिल गरेका थिए। अन्नान राष्ट्रसंघका महासचिव बन्ने पहिलो अफ्रिकी नागरिक...	Read more
भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । दिल्लीमा रहेको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान(एम्स) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वाजपेयीको उपचारका क्रममा निधन भएको आधिक...	Read more
इरानमा ६६ जना बोकेको विमान दुर्घटनामा
इरानमा एक विमान दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार ६६ जनाको मृत्यु भएको छ । असेमन एयरलाइन्सको विमानमा ६० यात्री, दुई सुरक्षाकर्मी र चालक दलका चार सदस्य सवार थिए । सो एयरलाइन्सले आफ्नो विमान दक्षिणी इरानमा दुर्घटना भएको र सबै यात्रीको मृत्यु भएको जनाएको छ । एयरलाइन्सका प्रवक्ता मोहम्मद ताघी टाबाटबइले इरानको टेलिभिजनलाई दिएको जानकारीअनुसार विमानमा सवार सबैको मृत्यु भएको छ । उडान भरेको केही बेरमै सो विमान राडारबाट गायव भएको थियो ।
समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार विमान इस्फहान प्रान्तको सेमिरोम सहर नजिकै पहाडी क्षेत्रमा दुर्घटना भएको हो । उद्धारका लागि पठाइएको एउटा हेलिकोप्टर खराब मौसमका कारण अवतरण गर्न नसकेको जनाइएको छ । (एजेन्सी)
पमाद्वत स्टारर अभिनेत्री दिपिका पादुकोण किन आउदै छिन् नेपाल?
एजेन्सी– बलिउड अभिनेता इरफान खान र अभिनेत्री दीपिका पादुकोण नेपाल आउने भएका छन् । उनिहरु एक फिल्म छायाँकनका लागि नेपाल आउने भएका हुन् । बिशाल भारदवाजको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्मको छायांकनका लागि उनिहरु नेपाल आउन लागका हुन् ।
फिल्म मार्च ५ बाट नेपालमा छायांकन सुरु हुने भारतिय सञ्चार माध्यम मुम्वई मिररले उल्लेख गरेका छ।
फिल्म युनिटले छायांकनको सम्पुर्ण तयारी पुरा गरि सकेको समेत समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
समाचारमा उल्लेख भए अनुसार फिल्मको कथा उपन्यास ‘माफिया क्विन्स अफ मुम्बई’ मा आधारित हुनेछ । नाम तय नभएको यो फिल्म क्रियाज इन्टरटेनमेन्ट र विशला भारद्वाज पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्माण हुनेछ । फिल्मको छायांकन नेपालको कुन–कुन ठाउँमा हुनेछ त्यसको जानकारी भने खुलाईएको छैन ।
यो फिल्ममा दीपिका पादुकोणले लेडी डन राहिमा खान उर्फ सपना दीदीको भूमिका निर्वाहा गर्नेछिन् ।
एक दिवसिय क्रिकेटमा ६ विकेटले भारतले हरायो दक्षिण अफ्रिकालाई ।
on: In: Highlights, खेलकुद, विश्व समाचार, समसामयीक
काठमाडौं माघ १९ ।
एक दिवसीय क्रिकेटको पहिलो म्याचमा भारतले दक्षिण अफ्रिकालाई ६ विकेटले हराएको छ । भारतको जितमा कप्तान विराट कोहली हिरो बनेका छन् । उनले शतकीय पारी खेल्दै ११२ रन बनाए । अन्तर्रा्ष्ट्रिय वनडे म्याचमा कोहलीले यो ३३ औं शतक बनाउन सफल भएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाको डरबानमा २७० रनको लक्ष्य भारतले ४५ ओभर ३ बलमा ४ विकेट गुमाएर भेटाएको थियो ।
भारतको लागि अजिंक्य रहाणेले ७९ रनको योगदान गरे । ४३ ओभरमा रहाणे र ४५ ओभरमा कोहली फेहलुकवायोको बलमा क्याचआउट भए । सातौं ओभरमा पहिलो विकेटको रुपमा रोहित शर्मा २० रन बनाउँदै आउट भएका थिए । तर कोहलीले टिमलाई सम्हाल्न सफल बनेका हुन् ।
दक्षिण अफ्रिकाका फेहलुकवायोले दुई र मोर्ने मर्केलले एक विकेट लिए । त्यसअघि टस जितेर पहिले व्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै २६९ रन बनाएको थियो । फाफ डुप्लेसिसले १२० रनको शतकीय पारी खेले । डुप्लेसिसका अलावा क्रिस मोरिसले ३७ र क्विन्टन डिकाकले ३४ रन बनाए ।
भारतका लागि सबैभन्दा धेरै विकेट कुलदीप यादवले लिए । उनले केबल ३४ रन खर्चिएर तीन विकेट झारे । युजवेन्द्र चहलले २ तथा भुवनेश्वर कुमार र जसप्रीत बुमराहले एक एक विकेट लिएका थिए भारत र दक्षिण अफ्रिकाबीच वन डे सिरिजको दोस्रो खेल आइतबार सेन्चुरियन सुपरस्पोर्ट पार्कमा हुनेछ ।
आफ्नै पल्टनका चारजना सहकर्मीको एक व्यतिmले गरे हत्या
भारतको अर्धसैन्य बलका एकजना सिपाहीले आफ्नै पल्टनका चारजना सहकर्मीको हत्या गरेका छन्।
सैन्य बलको केन्द्रीय शिविर भित्र रहेका सदस्यहरुमध्ये अन्य केही घाइते पनि भएका एक सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
शनिबार बेलुका स्थानीय समयअनुसार पाँच बजेतिर छत्तिसगढ राज्यको बिजपुर जिल्लामा सो घटना भएको हो। आक्रमणकारी सिपाहीले सँगै रहेका आफ्ना सहकर्मीहरुलाई बन्दुक प्रहार गरेका थिए।
छत्तिसगढ राज्यका बरिष्ठ प्रहरी अधिकृत सुन्दरराज पीले स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुलाई दिएको जानकारी अनुसार घटना के कसरी र किन भयो भन्ने बारेमा अहिले केही स्पष्ट नभएको र अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिए।
उनले दिएको जानकारीअनुसार सो सैन्य बलमा बन्दुक प्रहार गरी हत्यागर्ने ३५ वर्षीय सनाथ कुमारलाई पक्राउ गरिएको र सोधपुछ सुरु गरिएको पनि जानकारी दिएका छन्।
छत्तिसगढका मुख्यमन्त्रीले ट्वीटरमार्फत् घटनाको भत्र्सनागर्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। छत्तिसगढ राज्य माओवादी प्रभावित क्षेत्र मानिन्छ । रासस । एएफपी
सम्झनामा शशि कपुर, आज अन्तिम बिदाई
बलिउड अभिनेता शशि कपूर अब सम्झनामा मात्र रहेका छन्। उनको आज मंगलवार अन्तिम दाहसंस्कार हुने भएको छ । गत सोमवार निधन भएका उनान्असी वर्षका शशिको आज अन्तिम दाह संसाकार हुने भएको हो । लामो समयदेखि बिरामी रहेका शशिको कोकिलाबेन अस्पतालमा निधन भएको थियो । शनिवार उनलाई छातीमा निकै पीडा भए पश्चात उनको सोमाबार निधन भएको थियो । उनको निधन पश्चात बलिउडका कलाकारहरू उनको घरमा श्रद्धाञ्जलि दिन पुगेका थिए ।
अस्पतालका अनुसार उनले सोमवार साँझ ५ बजेर ३५ मिनेटमा संसार त्यागेका थिए। पृथ्वीराजका तीन छोरा राज कपूर, शम्मी कपूर र शशि कपूर मध्ये शशि कान्छा छोरा थिए। १९८४मा पत्नीको निधन पछी शशि एक्लो भएका थिए । उनका अहिले तीन सन्तान छन् ः कुणाल कपूर, करन कपूर र सञ्जना कपूर । शशिकोले आफ्नो अभिनय यात्रा पृथ्वी थिएटरको नाटक शकुन्ताबाट सुरु गरेका थिए ।उनि अभिनित पहिलो फिल्म आग हो जसलाई राज कपूरले बनाएका थिए । एजेन्सी
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्रा्ष्ट्रिय ‘स्पेश स्टेशन पृथ्वीमा ठोक्किने के छ त बास्तबिकता ?
on: In: Highlights, विश्व समाचार
काठमाडौं, कात्तिक २४ ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको चीनको पहिलो अन्तर्रा्ष्ट्रिय ‘स्पेश स्टेशन तियानगोंग–१’ नियन्त्रणबाहिर पुगेको बैज्ञानिकहरुले अनुमान गरेका छन् । उक्त अनियन्त्रीत स्टेशन पृथ्वीमा आएर पुन ठोक्किने अनुमान गरिएको ।
गतवर्षको सेप्टेम्बर महिनादेखि नियन्त्रणबाहिर पुगेको ८.५ टनको ’स्पेस स्टेशन तियानगोंग–१’ आगामी वर्षको जनवरीदेखि मार्च महिनासम्ममा पृथ्वीमा ठोक्किने ’युरोपियन स्पेस एजेन्सी’ (इएसए)का वैज्ञानिकहरुको अनुमान रहेको छ।
इएसएका वैज्ञानिकहरुले हराइरहेको उक्त ’स्पेस स्टेशन’ पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणभित्र प्रवेश गरेपछि आगोको ज्वालासहित स्पेन, इटली, टर्की, ब्राजिल, चीन, भारत र अमेरिकाका भु–भागमा ठोक्किन सक्ने बताएका छन् ।वैज्ञानिकहरुले अहिलेदेखि नै सबै वैज्ञानिकहरुलाई उक्त ’स्पेस स्टेशन’ पृथ्वीमा फर्कने समयको निरीक्षण गर्न चेतावनी दिएका छन् ।
’डेलिमेल अनलाइन’का अनुसार चीनले सन् २०१२ सेप्टेम्बर २९ मा सबैभन्दा ठूलो मानिएको चीनको पहिलो ’स्पेस स्टेशन तियानगोंग–१’ चीनको ’अर्थ स्टेशन’बाट प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, सन् २०१६ को सेप्टेम्बर महिनादेखि उक्त स्टेशन पृथ्वीबाट ३०० किलोमिटरमाथी अन्तरिक्षको कक्षमा नियन्त्रणबाहिर गएर हराएको चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले पुष्टि गरेका थिए ।
’युरोपियन स्पेस एजेन्सी’का प्रमुख होल्गेर क्रगले उक्त ’स्पेस स्टेशन’ हराएको कक्षबाट पृथ्वीतिर फर्किदा उत्तरी ध्रुब ४३ डिग्री वा दक्षिण ध्रुब ४३ डिग्री कोणमा ठोक्किने अनुमान गरेको बताए । उनले उक्त ’स्टेशन’ पृथ्वीमा फर्किने निश्चित रहेको तर त्यसको समय चैं अध्ययनका आधारमा अनुमान गरेको बताए ।इएसएका वैज्ञानिकहरुले आगामी वर्षको फेब्रुअरीमा खगोलविदहरुसंग ‘तियानगोंग–१’ले पृथ्वीमा पुन प्रवेश गर्ने र त्यसलाई कसरी निरीक्षण गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गोष्ठि गर्ने उल्लेख गरेको छ । एजेन्सी
भुकम्मपमा परी ६१ को मृत्यु ३०० भन्दा बढा घाईते
२७ कात्तिक, बगदाद ।
इरान र इराकको सीमावर्ती क्षेत्रमा ७ दशमलव २ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा ६१ जनाको मृत्यु भएको छ । ३ सय बढी व्यक्ति घाइते भएका बीबीसीले लेखेको छ ।
इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार भूकम्पबाट कयौं हताहत भएका छन् । भूकम्पका कारण बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ ।
अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षणका अनुसार भूकम्पको केन्द्रविन्दु इराकको हलब्जाबाट दक्षिण(पश्चिम ३२ किलोमिटर टाढा पर्दछ । भूकम्पको धक्का धेरै प्रान्तहरुमा महसुस गरिएको थियो ।
कुर्दिश टेलिभिजनका अनुसार इराकी कुर्दिस्तानका बासिन्दा भूकम्पका कारण धेरै व्यक्तिहरु घरबारविहीन भएका छन् । यद्यपि सो क्षेत्रमा जनधनको क्षतिबारे विवरण आइसकेको छैन ।